नेपालमा ६० प्रतिशतले घट्यो कोरोना सङ्क्रमण Global TV Nepal
नेपालमा ६० प्रतिशतले घट्यो कोरोना सङ्क्रमण
ग्लोवल टि.भी. आइतवार, अशोज २४, २०७८ 0
काठमाडौं-नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ६० प्रतिशतले घटेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ।
भदौको पहिलो साता ४० हजार ३३८ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेकामा अहिले असोजको पहिलो साता त्यो संख्या १५ हजार ९४२ पुगेको छ।
सङ्क्रमणमा उल्लेख्य कमी देखिएका कारणमध्ये कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पनि योगदान रहेको मन्त्राययका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। साथै उनले भाइरसबाट बच्न नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्नु सङ्क्रमण घट्नुको अर्को कारण भएको बताए।
शनिबार मात्र १२ हजार ३१ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा ७६० जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। अहिले कूल परीक्षणमा ७ प्रतिशतमात्र सङ्क्रमण देखिने गरेको छ। हिजो सक्रिय सङ्क्रमित १५ हजार ३४० जना रहेका थिए। पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, झापा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र रुपन्देही रहेका छन्।
नेपालमा सङ्क्रमणदर १८.७ प्रतिशत र सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९६. ७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लक्ष्यअनुसार लगाएको पाइएको छ। असोज मसान्तसम्म कूल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म पहिलो मात्रा ४० प्रतिशत र पूर्ण मात्रा ३२ प्रतिशतलाई लगाइएको छ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पहिलो मात्रा ८१ प्रतिशत र पूर्ण मात्रा ७४ प्रतिशतलाई लगाइएको छ। उपत्यकामा १७ लाख ४५ हजार ५७० जनालाई खोपको पहिलो मात्रा र पूर्ण मात्रा १७ लाख ७९ हजार ८९७ जनालाई लगाइएको छ। उपत्यकामा १८ वर्षमाथिका २१ लाख २९ हजार ७७३ जना रहेका छन्।
नेपालमा अहिलेसम्म सङ्क्रमणमुक्त हुने नागरिक सात लाख ७५ हजार ७२ जना छन् भने सङ्क्रमणबाट ११ हजार २२१ जनाको निधन भइसकेको छ। हाल देशभर ३१७ जना सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), ११३ जना भेन्टिलेटर, १४ हजार १६८ जना होम आइसोलेसन, एक हजार १७२ जना संस्थागत आइसोलेसन र २३६ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
यसरी सरकारको लक्ष्यअनुसार नै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चित भएको छ। पहिलो मात्रा ८७ लाख दुई हजार ७०५ र पूर्ण मात्रा ६९ लाख ६२ हजार १६४ जनालाई लगाइएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जनालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
बाढी र पहिरोले प्रदेश-१ मा ४९ जनाको मृत्यु, बेपत्ता हुनेको संख्या १६ पुग्यो
६६२ कोरोना संक्रमित थपिए, १३को मृत्यु
देशभर बाढीपहिरो र डुबानमा परेर ४८ जनाको मृत्यु, ३१ जना वेपत्ता
माधव नेपाल निकटका निरन्जन झा रेल्वे कम्पनीको महाप्रवन्धकमा नियुक्त
सभामुखले राजनीतिलाई कुबाटोमा लगेकोे नेकपा अध्यक्षको आरोप
आज कोरोना महामारीको दोस्रो लहरकै बीच चैतेदशैं पर्व मनाइँदै
जसपाका ठाकुर र महतोसहित १६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट हटाईयो
मोतीपुर घटनाका मुख्य आरोपी पक्राउ
‘यही गतिमा संक्रमण फैलिए अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ हुने छैन’